Afghanistan: Taalibaan oo ku dhawaaqday sharciyo cusub oo la xiriira dumarka waxbarta - Bulsho News
Afghanistan: Taalibaan oo ku dhawaaqday sharciyo cusub oo la xiriira dumarka waxbarta
Ardayda xijaaban ee Jaamacadda Shaheed Rabbani ee Kabul.
Jaamacadaha Afqaanistaan ​​waxaa lagu kala sooci doonaa ragga iyo dumarka, waxaana la soo bandhigi doonaa xeerka labiska cusub ee Islaamka, ayay Taalibaan sheegtay.
Wasiirka Tacliinta Sare Cabdul Baqi Haqqani ayaa tilmaamay in haweenka loo oggolaan doono inay wax bartaan, balse aan la barbar dhigi doonin ragga.
Waxa kale oo uu ku dhawaaqay in dib -u -eegis lagu sameeyo maaddooyinka la baro.
Dumarka iyo gabdhaha ayaa laga mamnuucay iskuulada iyo jaamacadaha hoos yimaada Talibaan intii u dhaxaysay 1996 ilaa 2001.
Taalibaan ayaa sheegtay inaysan ka hor istaagi doonin haweenka inay wax bartaan ama ay helaan shaqooyin. Laakiin tan iyo markii ay xukunka la wareegeen 15-kii Ogosto, waxay ka codsadeen dhammaan haweenka, marka laga reebo kuwa ku jira waaxda caafimaadka dadweynaha, inay ka fogaadaan shaqada, ilaa xaaladda ammaanka soo hagaagto.
Shaacinta siyaasadda tacliinta sare ayaa imaanaysa maalin uun kadib markii Taalibaan ay calankooda ka taagtay madaxtooyada, taasoo muujineysa bilowgii maamulkooda. Waxay la wareegeen gacan ku haynta dalka Afghanistan bil ka hor.
Siyaasaddu waxay calaamad u tahay isbeddel weyn oo ka yimid dhaqankii la aqbalay ka hor inta aysan Taliban la wareegin. Jaamacadaha waxeey ahaayeen kuwo ay wax ka bartaan rag iyo dumarba , khasabna ma ahayn in ardeyda gabdhaha ah ay u hoggaansamaan xeerka labiska.
Laakiin Mr Haqqani wuxuu ahaa mid aan raalli ka ahayn soo afjaridda xiisadaha isku dhafan. “Wax dhibaato ah naguma hayso soo afjaridda nidaamka isku dhafka waxbarashada,” ayuu yiri. “Dadku waa Muslimiin wayna aqbali doonaan.”
Qaarkood waxay soo jeediyeen in xeerarka cusubi uu haweenka ka reebi doono waxbarashada waayo jaamacaduhu ma haystaan ​​dhaqaale ay ku bixiyaan fasallo gooni ah. Si kastaba ha ahaatee, Mr Haqqani wuxuu ku adkeystay inay jiraan macallimiin haween ah oo ku filan.
“Wax walba waxay ku xiran yihiin awoodda jaamacadda,” ayuu yiri. “Waxaan sidoo kale u adeegsan karnaa macallimiin rag ah inay wax ka dhigaan daaha gadaashiisa, ama aan adeegsanno farsamada.”
Gabdhaha iyo wiilasha ayaa sidoo kale lagu kala sooci doonaa dugsiyada hoose iyo kuwa sare, oo horeba uga jiray Afgaanistaan ​​oo dhan.
Dumarka waxaa laga rabaa inay xirtaan xijaab, si kastaba ha ahaatee Mr Haqqani ma uusan cayimin haddii khasab ay tahay in wejiga la daboolo ama niqaab la xiranayo iyo in kale.
Wasiirka cusub ee xilka la wareegay ayaa sidoo kale sheegay in maadooyinka lagu dhigo jaamacadaha dib loo eegi doono. Wuxuu u sheegay suxufiyiinta in Taalibaan ay doonayso inay “abuurto manhaj macquul ah oo Islaami ah oo waafaqsan qiyamkayaga Islaamka, kan qaranka iyo kan kaleba, dhanka kalena, ay awood u yeelan karto inay la tartanto dalalka kale”.
Ku dhawaaqista ayaa imaanaysa ka dib mudaaharaad ay haween taageersan siyaasadaha jinsiga ee Taalibaan ay shalay ka dhigeen Jaamacadda Waxbarashada Shaheed Rabbani ee Kabul.
Boqolaal haween ah oo badankoodu xiran niqaab madow oo sita calanka Taalibaan, ayaa jeediyay khudbado ay ku ammaanayaan taliska cusub waxayna weerareen kuwii ku lugta lahaa bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay guud ahaan dalka oo ay ku dalbanayaan in la ilaaliyo xuquuqda haweenka.
Xukuumadda cusubi waxay kaloo beddeshay Wasaaradda Arrimaha Haweenka oo loo beddelay Wasaaradda Ku -xigeenka iyo Wanaagga.
Waaxda aadka looga baqayo ayaa mas’uul ka ahayd in booliska diineed la geeyo waddooyinka si ay u meel mariyaan ku dhaqanka Shareecada intii ay Talibanka awoodii hore haysteen. Waxay caan ku noqotay garaacidda dumarka xadgudubyada sameeya sida xirashada dharka aan habboonayn iyo bannaan ay haweenka u baxaan iyagoo oo aan la socon qof lab ah oo mas’uul ka ah.
Dumar badan oo caan ah oo xirfadlayaal ah ayaa ka qaxay Afgaanistaan ​​iyaga oo filayay xeerka adag ee kooxda. Fannaanadda weyn ee Aryana Sayeed ayaa dalka kaga tagtay diyaarad xamuul oo Mareykan ah waxaana agaasimihii filimka caanka ahaa Sahraa Karimi la geeyay Ukraine.